Iimaphu zikaGoogle zongeza ulwazi malunga nomda wesantya xa sihamba | Iindaba zeGajethi
Iimaphu zikaGoogle zongeza ulwazi malunga nesantya esinqabileyo xa sihamba
UIgnacio Sala | | IGPS
Kwiminyaka eyadlulayo, izixhobo ze-GPS zahluthwa zii-smartphones kunye nokusetyenziswa okusivumela ukuba silandele indlela enezikhombisi ezifanayo ngokungathi isixhobo seTomTom okanye iGarmin siyenzilehlaziya iikhamera zesantya seTomTom simahla). Iimodeli zamva nje ezithe zasungulwa zezi nkampani ukongeza ekusikhokeleni inyathelo ngenyathelo ukuya kwindawo esiya kuyo Baye basazisa nangemida yesantya yendlela esasiqhuba ngayo, ukongeza ekusaziseni ukuba siyigqithile. Olu lwazi lunokubaluleka ngakumbi kwizixeko, apho umda wesantya awusoloko ufana.
I-TomTom, njengoGarmin, igqibe kwelokuba iyeke izixhobo zokwenza imveliso kwaye itshintshele kumaqonga ahambayo, ukubonelela ngenkonzo efanayo ye-GPS kodwa ngesicelo. Nangona kuyinyani ukuba ezi nkonzo zemephu zigqibelele, kuba zihlawulwe, uninzi lwabantu lukhetha ukusebenzisa iimephu zikaGoogle, ezithi kwiinyanga ezimbalwa ivumela ukuba sikhuphele nge-Wi-Fi iindawo esiza kuzityelela kwaye sihambe kuzo.
Kodwa enye yezona mpazamo zibalulekileyo kwiimephu zikaGoogle ebehlala enazo xa usikhokela kwindlela Kukungabikho kolwazi malunga nesantya sohambo senza. Oku kungabikho kolwazi kungakhokelela kwisohlwayo, ngakumbi eSpain, apho izikhombisi zendlela zishiya okunqwenelekayo, ngakumbi ezo zibeka umda wesantya.
Kodwa ekugqibeleni kubonakala ngathi abafana abavela kwi-Mountain View babambe kwaye Baqala ukubonelela ngolu hlobo lolwazi ngokusebenzisa isicelo sabo. Ayiloxesha lokuqala ukuba uGoogle aluvavanye olu hlobo lolwazi kwisicelo sayo, kuba inguqulelo ye-beta ye-v9.35 ineswitshi esivumele ukuba siyisebenzise, ​​iswitshi eyanyamalala kwii-betas zamva.
Kodwa kubonakala ngathi lo msebenzi wenziwe waphinda wenziwa ukuba usebenze kwakhona, ngoku ngokungagqibekanga, ngokweemifanekiso ezininzi ezithunyelwe ngabanye abasebenzisi kwiReddit. Ulwazi malunga isantya secandelo esikulo ukuba ubeke indawo esezantsi ngasekhohlo kwesikrini, ngaphezulu nje kwexesha esishiye ngalo ukufikelela kwindawo esiya kuyo. Okwangoku asazi ukuba kuya kuthatha ixesha elingakanani ukuba olu khetho lutsha lufikelele kubo bonke abasebenzisi, kodwa ngethemba lokuba luza kubakho kungekudala, kuba lwalungomnye wabo babalaseleyo kodwa lwaluneeMephu zeGoolge.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » elektroniki » IGPS » Iimaphu zikaGoogle zongeza ulwazi malunga nesantya esinqabileyo xa sihamba
INew Gleen ligama iBlue Origin ayibhaptize ngayo irocket enkulu
I-Parrot iveza i-minidrones zayo ezintsha, u-Swing no-Mambo, sikubonisa zona